မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ရွှေရောင်အလင်းတန်း
ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ယွင်းခဲ့ ဘူးတယ်။ မင်းတို့ ငါ့လိုမဖြစ်စေချင်လိုက်တာလူဆိုတာ
စဉ်က”စံပါ”လို့ ခေါ်တဲ့မြို့ လေးမှာ "သောနဒတ္တ" လို့ ခေါ်တဲ့ပုဏ္ဍ္တားကြီးအုပ်ချုပ်နေ
ဆိုပီး”စံပါ" မြို့ ကိုကြွတော်မူတယ်ပုဏ္ဍ္တားကြီးကိုမေးလိုက်ပုံကသင်တို့ ဗြဟ္မဏမျိုးဘာ ကြောင့်မြင့်မြတ်ရသလဲလို့ မိန့် တော်မူတော့ ပုဏ္ဍ္တားကြီးဖြေလိုက်ပုံကတပည့်တော်တို့ 
(၃)ဗေဒင်၊မန္တာန် တွေအလွတ်ရ ရမယ်ဘုရား
လို့ လျှောက်တင်အပီးမှာဘုရားရှင်က တကယ်လို့ များတစ်ယောက်ယောက်က
(၁)ချက်လျှော့ကွာဆိုရင်လို့ မေးတော့မဆိုင်းမတွပဲလွယ်ပါတယ်ဘု၇ား ရုပ်ရည်
ချောမောလှပ ရမယ် ဆိုတဲ့အချက်ကိုလျှော့မယ်ဘုရားရုပ်လှတာဆိုးတာကဘ၀
ဘ၀ ကကုသိုလ်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်ဘုရားရှင်က(၂)ချက်လျှော့ကွာဆိုရင်ေ၇ာပုဏ္ဍ္တား
ကြီးမဆိုင်းမတွပဲဗေဒင်၊မန္တာန် တွေအလွတ်ရ ရမယ်ဆိုတာလျှော့ပါမယ်ဘုရားအ
လွတ်မရလဲ ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာရှိပီးသားပါဘုရားရှင်က(၃)ချက်လျှော့ကွာဆိုတော့ ပုဏ္ဍ္တားကြီးမဆိုင်းမတွမဖြေနိုင်တော့ချန်စရာ၂ချက်ပဲကျန်တော့တယ်လေခဏကြာမှ
ဆီကဘာ မှမကြားရတော့ ပေမဲ့မြို့ သူမြို့ သားတွေဆီကအသံ တွေထွက်လာတာက
အမျိုးသန့် ချင်လို့ ဒီအချက်ကိုထည့်ထားတာမဖြုတ်နိုင်ပါဘူး ဆိုတော့ပုဏ္ဍ္တားကြီးက
သူမြို့ သူ/သားအားလုံးကိုငါချန်ထားတာက (၄)ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းရမယ် (၅)
မျိုးရိုးတင်မကဘူး လူမှန်ရင် လိုအပ်တဲ့အချက်လို့ ယူဆတယ်.တန်ဖိုးရှိတဲ့သူမှန်ရင်
ရှင်ကပှုဏ္ဍ္တားကြီးမင်းအယူအဆနဲ့ငါ့အယူအဆ ထပ်တူထပ်မျှရှိတော်မူတယ်လို့ 
မိန့် ကြားပီးတရားအဆုံးသတ်မှာဒေသနာတစ်ခုနဲ့ အဆုံးသတ်တော်မူလိုက်တယ်။
ဟုတ်တယ်သူငယ်ချင်းလူတစ်ယောက် တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ တိုင်းတာချင်
ရင်ဥစ္စာတွေဘယ်လောက်ရှိလဲ? ၇ာထူးတွေ? ပညာတွေဘယ်လောက်တတ်လဲဆို
တာနဲ့ မတိုင်းနိုင်ဘူးလူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာကိုယ်ကျင့်တရားဘယ်လောက်
ကောင်းလဲ? မှားမှန်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာဘယ်လောက်ရှိလဲ? ဆိုတာနဲ့ တိုင်းတယ်အဲဒီတုန်း
က ငါ့ကိုယ်ကျင့်တရားဟာတိုင်းတာလို့ မ၇အောင်ပျက်စီးနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မှာမှန်ခွဲ
နိုင်တဲ့ပညာနဲ့ ငါလမ်းမှန်ကိုလျှောက် နိုင်ခဲ့ပြီ......
မင်းတို့ အားလုံးလည်း...... လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ.......
Author Anonymous at 11:23:00 PM